Tafatafa tamin'i Kader Irchad Barry - Politika
KADER IRCHAD BARRY
Mpandrindra nasionaly ny hetsika « Rasoaza »
Mangotrakotraka ny hetsika ho an’ny miralenta sy ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny karazana. I Kader Irchad Barry, Mpandrindra nasionaly ny hetsika « Rasoaza » izay notontosain’ny Foibe eoropeana manohana ny fifidianana no milaza ny heviny amintsika.
Ahoana no fahitanao ny VBG eto Madagasiakara amin’ny ankapobeny?
Ny Fanadihadiana nasionaly momba ny fanarahana ny maridrefin’ny Tanjon’ny taonarivo fahatelo ho an’ny fampandrosoana (ENSOMD) natao tamin’ny taona 2012-2013 dia mampiseho fa ny vehivavy dia miharitra karazana herisetra samihafa, ao ny ara-batana, ara-piraisana ara-nofo, ara-tsaina sy ara-toekarena. Ny antontan’isa voaangona dia mampiseho fa ny 30% ny vehivavy 13 ka hatramin’ny 49 taona dia efa nianjadian’ny herisetra farafaha ratsiny nandritra ny 12 volana farany nialoha ny fanadihadiana. Ankoatra izany dia zava-dehibe ny fahatsapana fa eto Madagasikara ny VBG dia toe-javatra tsy firesaka loatra noho ny fomba amam-panao sy ny tsindry avy amin’ny fiaraha-monina ary noho ny kisarisary voizina zary raiki-tapisaka, izay manery ny olona iharan’ny herisetra hangina ka mahatonga ny mpanao herisetra ho tsimatimanota. Tsara homarihina koa anefa fa i Madagasikara dia nahavita dingana lehibe noho izy nankatoa ny Tetikady nasionaly ho an’ny ady amin’ny VBG sy ny drafitrasa 2017-2021 mifanaraka amin’izany, ary ny Tetikady “miralenta sy fifidianana” ho an’ny taona 2015-2020. Na dia eo aza izany dia efa misy fahatsiarovantsaina hanova izay manomboka mitsimoka sy maka endrika. Tsara ho marihana ny fitombon’ny mpandray anjara eto an-toerana sy avy any ivelany, miankina amin’ny fanjakana na tsy miankina amin’ny fanjakana, izay mirotsaka an-tsehatra mihatrika ireo olana ireo. Amiko izany amin’ny ankapobeny dia efa misy fanamby napetraka na dia vao manomboka aza ny tolona.
Misy ve faritra manokana ahitana fa ambony kokoa ny tahan’ny herisetra atao amin’ny vehivavy? Inona araka ny hevitrao no antony lehibe mahatonga io karazana herisetra io mahazo faka eto Madagasikara?
Araka ny hevitry ny ENSOMD hatrany, ny faritra ahitana betsaka indrindra ny tahan’ny vehivavy iharan’ny karazana herisetra iray farafaharatsiny dia ny faritra Melaky izay ahitana taha 52,5%, Vatovavy-Fitovinany 43% ary Menabe 42%. Raha ny mahakasika ny tahan’ny fampanambadiana zaza latsaka ny 18 taona indray dia ny faritra Melaky misy taha 63,6%, Atsimo-Atsinanana 59,8 % ary Menabe 58,4 % no faritra voakasika manokana. Tokony hisy fikarohana atao mba hahitana ny antony manokana eto Madagasikara, fa amin’ny ankapobeny dia azo atao ny manasokajy ireo antony ireo arakaraka ny modely atolotra. Misy araka izany ny antony mahakasika ny tsirairay avy: ny taona, ny fidirambola, ny fanjifana toaka sy/na zava-mahadomelina, ny fikorontanan’ny maha izy ny tena, ny efa niatrehana herisetra fahiny na tsia, sns. Misy koa ny antony iombonana: ny fiaretana ny herisetra, ny fady sns., ary ny antony ara-piaraha-monina, indrindra indrindra ny resaka fenitra ara-piaraha-monina, ny fenitra ara-pomba amam-panao sns.
Amin’ny lafiny inona no tokony hafantoka ny ady atao amin’ireny herisetra mifototra amin’ny karazana ireny?
Eo amin’ny lafiny ara- politika sy mahakasika ny lalàna ary ara-pitsarana no tokony hiasana, ka hamafisina ny lalàna. Tsy ambanin-javatra ihany koa ny fidinana eny anivon’ny mpiara-monina amin’ny alalan’ny tetikadim-pifandraisana izay natao hitondra fiovam-pihetsika ifanarahan’ny mpisehatra rehetra. Eo amin’ny lafiny teknika dia tokony hampitomboina ny rafitra mandray an-tanana ireo olona izay iharan’ny herisetra, ary tokony asiana fiofanana ho an’ireo olona izay hiandraikitra izany fandraisana an-tanana izany. Eo amin’ny lafiny fanabeazana dia tokony asiana fanentanana ho an’ny mpianatra manomboka any amin’ny fanabeazana fototra mba hamolavolana taranaka vaovao tongasaina manoloana ny herisetra mifototra amin’ny karazana, ary voataiza hiady amin’ireny herisetra ireny. Ankoatr’izany dia zava-dehibe ny manangana fomba fiasa iray izay ahazoana mandrindra ny mpisehatra rehetra mandray anjara amin’izao ady izao, ary koa manangana rafitra iray entina hanaramaso sy hanao tombana ny tetikasa rehetra tontosaina.
Nangonin’i Karina Zarazafy
Herisetra Herisetra mifototra amin’ny karazana (VBG) Kader Irchad Barry Rasoaza